Grand US Police Prison Escape Game အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် APK（70.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Grand US Police Prison Escape Game
အကောင်းဆုံးကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ရေးဂိမ်းကိုခံစားပါ။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဖြစ်နိုင်သည့်ဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဖြစ်နိုင်သည့်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုတွင်အမေရိကန်ရဲကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်စွန့်စားမှု 2020 မှလွတ်မြောက်ပြီးသင်အကျဉ်းထောင်များဖြင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးအခြားရာဇ0တ်သားများနှင့်တစ်သက်တာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဒီအမေရိကန်ရဲအကျဉ်းထောင်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းကလွတ်မြောက်လာတဲ့ပွဲကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ထောင်ထဲကနေဖြတ်သန်းခြင်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်သင်၏လွတ်မြောက်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်အောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ မဖြစ်နိုင်သည့်အကျဉ်းထောင်တွင် 2021 စွန့်စားမှုမှလွတ်မြောက်ရန်သင်၌ရာဇ0တ်မှုကျူးလွန်သူများထံမှရာဇ0တ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ထောင်မှလွတ်မြောက်ရန်သင်သွားရလိမ့်မည်။ ဂိုဏ်းသားရဲများကပြင်းထန်တဲ့ထောင်ချောက်ထားတဲ့လုံခြုံရေး။ ဤအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့အကျဉ်းသားများမှာခေတ်သစ်ရာဇ0တ်မှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ adrenaline Rush Action -based ဂိမ်းဖြစ်သည်။
Grand Us Mission Sarger Mances 2021 သည်သင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဂိမ်းစွန့်စားမှုအစီအစဉ်များကိုပေးသည် အောင်မြင်သောထောင်လွတ်သို့မဟုတ် Jailbreak ဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ရန်။ ထောင်မှလွတ်မြောက်ရန်မစ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောလုံခြုံရေး - အခြေခံ. သင်ပိုမိုအားထုတ်မှုနှင့်ရုန်းကန်မှုလိုအပ်သည်။ ဤအကောင်းဆုံးအမေရိကန်ရဲအကျဉ်းထောင်များကို0ယ်ယူပါ။ ကောက်ကောက်ထောင်ချရေးကိုဖြတ်သန်းရန်အလျင်အမြန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောပုန်းအောင်းရန်အလျင်အမြန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်ပုန်းအောင်းခြင်းနှင့်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်အလျင်အမြန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်မစ်ရှင်များရှိခြင်း အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့အကျဉ်းထောင်များထံမှကစားရန်ရွေးချယ်ပါသလော။ Simulator Games သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှင်သန်မှုဂိမ်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်လော။ ဤအကျဉ်းထောင်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်လွတ်မြောက်ရန်မစ်ရှင်များကိုအောင်မြင်စွာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီနှစ်မှာအဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းရဆုံးကိုယ်ပျောက်နေတတ်ဆုံးကိုယ်ပျောက်အမေရိကန်ရဲအကျဉ်းထောင်ကို Download လုပ်နေတာကိုကျော်လွှားနေတာလဲ။
ဒီ Grand Agresent Adventure ဂိမ်းများသည်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သောအခြားရှင်သန်မှုဂိမ်းများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဤအကျဉ်းထောင်အားချိုးဖောက်ခြင်းစွန့်စားမှုဂိမ်းများသည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းများနှင့်ဆင်တူပြီးအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထွက်ခွာသွားသည့်ဂိမ်းများကိုပြုလုပ်နေစဉ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးနှင့်ဆင်တူသည်။ အကောင်းဆုံးထောင်မှလွတ်မြောက်ရေးဂိမ်းများအားလုံးဥပဒေကြမ်းများအားလုံးသည်ရာဇ0တ်မှုန့်များကိုမျက်မြင်သက်သေများကမျက်မှောက်ခေတ်အမှာစာများကသင့်အမှားအနည်းငယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်သည့်ဘ0ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်သည့်ရာဇ0တ်သားများအကြောင်းအမိန့်များမှာအမှတ်အသားပြုသည်။ အကျဉ်းထောင်ဆဲလ်ဂိမ်းများ၏အန္တရာယ်များမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်သင်၏သေနတ်များကိုစွန့်စားမှုဂိမ်းများကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏သေနတ်များကိုတင်ရန်သင်၏သေနတ်များကိုတင်ရန်သင်၏သေနတ်များကိုတင်ရန်သင့်သေနတ်များကိုတင်ပါ။ City Rechout Myanmar သည်အမေရိကန်ရဲများကိုကယ်တင်ရှင်အားလွတ်မြောက်လာသောမြို့ပြရဲများကဖမ်းဆီးခြင်းကိုအခမဲ့ပါ0င်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပါရမီရှင်ကို အသုံးပြု. လွတ်မြောက်ခြင်း Escape Jesusts Games မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့်ဂိမ်းများကိုကစားနေစဉ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ Jail ဂိမ်းများမှရာဇ0တ်မှုဒဏ်ကိုခံရမည်။ သင်ရဲရင့်စွာရဲတိုက်ဂိမ်းများ၏လုံခြုံမှုနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏ဘ0ကိုစွန့်ခွာရန်လုံလောက်သောရဲတိုက်ဂိမ်းများအားလုံးကိုပြောပြသည်။
- - ၏အလိုအလျောက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဂရပ်ဖစ်နှင့်ကာတွန်းကားများ Jailbreak ဂိမ်းမှ Jailbreak ဂိမ်းမှ K9s နှင့်အတူစွဲလမ်းစေသည့် Multiples Missions ။
Grand US Police Prison Escape Game Android Gameplay
Grand US Police Prison Escape - Best PC Android
Games PB Action 2
Grand US Police Prison Escape Game 1.1.18
Grand US Police Prison Escape Game 1.1.16
Grand US Police Prison Escape Game 1.1.15
Crime Fighter Action Hero 2019